Ama-tattoos onkulunkulu base-Olimpiki: uZeus, uPoseidon noMedusa | Ukudweba imifanekiso emzimbeni
Ama-tattoos onkulunkulu base-Olimpiki: uZeus, uPoseidon noMedusa
I-Los imidwebo ye onkulunkulu (nezinye izidalwa) zaseGrisi naseRoma zakudalaNgaphezu kokuphola kakhulu, bayavuma amathuba amaningi.
Namuhla sizokhuluma ngakho ezimbalwa onkulunkulu, UZeus noNeptune, futhi esinye sezilo zasenganekwaneni kakhulu zalesi siko, iMedusa.
1 UZeus, unkulunkulu ophakeme kunabo bonke
2 UPoseidon, inkosi yezilwandle
3 UMedusa, lowo onezinwele ezincimfelwayo
UZeus, unkulunkulu ophakeme kunabo bonke
Into enhle kakhulu ngonkulunkulu basendulo ukuthi, noma ngabe babengonkulunkulu kangakanani, babesenezimfanelo zobuntu. Ngakho-ke, uZeus wayengunkulunkulu obaluleke kunabo bonke wase-Olympus, njengoba aphonsela inselelo ubaba wakhe ukuba athathe indawo yakhe, futhi wayebusa phezu kweziphepho nombani, kodwa futhi wayengumuntu othanda abesifazane (futhi emkhombeni, ngoba wayelala namanye amadoda) , okwaholela ekubeni abe nabathandi nezinkinga yonke indawo.
Ku-tattoo, ungakufanekisa njengoba kukhonjisiwe emisebenzini yobuciko: nge umbani usesandleni futhi uhleli ngesikhundla esihle.
UPoseidon, inkosi yezilwandle
UPoseidon ugibela amagagasi ngamahhashi akhe amhlophe (noma izidalwa eziyinyoka ezinamandla, kuya ngohlobo) futhi unolwandle lonke ngomusa wakhe. Ungumfowabo kaZeus kepha, ngokungafani naye, ungunkulunkulu ozothile nonobungane, yize lapho ethukuthela angadala izivunguvungu ezimbi ngokushayela i-trident yakhe phansi olwandle. Futhi kwakucatshangelwa ukuthi kwakuyizimpawu ze-Atlantis, izwekazi elimnandi nelicwilisiwe.
Ku-tattoo ungakhombisa i-poseidon olwandle nge-trident yakhe, isici esisetshenziselwa ukusikhomba emisebenzini yasendulo.
UMedusa, lowo onezinwele ezincimfelwayo
Indaba kaMedusa, ongeyena unkulunkulukazi ngokusemthethweni, kodwa oyisilo esikhulu, idabukisa kakhulu (futhi, njengenjwayelo, inezinguqulo eziningi, yize kungekho noyedwa ojabule ukusho). Inganekwane ithi ngumuntu owadlwengula uPoseidon ethempelini lika-Athena. U-Athena wathukuthela futhi, esikhundleni sokujezisa uPoseidon, wagxeka uMedusa ngokuthi abambe abantu ababembheka emehlweni futhi aphendule umhlwenga wakhe omuhle waba yizinyoka.
Kumathambo onkulunkulu, UMedusa usetshenziselwa ukufanekisa ngokunembile ngezinwele zakhe zenyoka.
Bewuzazi izindaba zalawa ma-tattoos onkulunkulu? Sitshele kumazwana!
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » AmaTattoos amahle » Ama-tattoos onkulunkulu base-Olimpiki: uZeus, uPoseidon noMedusa
Ungahlukanisa kanjani ama-tattoos amadala ukuze uphinde uwathinte
Iphepha le-Hectographic, elinye lamathuluzi ayisisekelo abaculi be-tattoo